Maraykanka oo hakiyay heshiis uu maydad kula soo wareegayay | Berberanews.com
Home WARARKA Maraykanka oo hakiyay heshiis uu maydad kula soo wareegayay
Dawladda Maraykanka ayaa hakisay dadaalladii ay kula wareegaysay haraaga askartii laga laayay intii uu socday dagaalkii Kuuriya, iyadoo bartanka lagaga jiro xilli uu go’ay xiriirkii uu dalku la laahaa Kuuriyada Waqooyi.
Kuuriyada Waqooyi ayaa sannadkii hore wareejisay haraaga maydadka konton askari oo Maraykan ah oo la dilay intii u dhaxaysay 1950-1953 markaas oo dagaal socday.
Arrintaas ayaa muujinaysay in uu soo hagaagayo calaaqaadka u dhaxeeya madaxweynaha Maraykanka Donald Trump iyo hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un.
Balse Wasaaradda Gaashaan dhigga ee dalka Maraykanka ayaa sheegtay in ay hakisay qorshahaas ka dib markii ay waxba ka soo naaso caddaan waayeen shirkii labada hoggaamiye ay yeesheen.
Askar lagu qiyaasay 36,000 oo ciidammada Maraykanka ka tirsan ayaa ku geeriyooday dagaalkii Kuuriya, Maraykankuna wuxuu sheegay in aan wali meelna lagu ogayn in kabadan 7,700 askri.
Ku dhawaad 5,300 oo askartaas ka mid ah ayaa lagu waayay gudaha Kuuriyada Waqooyi.
Dadaalka labo geesoodka ah ee dib loogu soo celiyo haraaga maydadkii askarta Maraykanka ayaa qayb ka ahaa fulinta heshiisyadii ay gaareen Trump iyo Kim kulankoodii u horreeyay ee Singapore ka dhacay 2018.
Balse xiriirkii ayaa hakaday ka wixii ka dambeeyay kulankoodii labaad ee Vietnam ay ku yeesheen sannadkan, kaas masuuliyiintan ay ku guuldarraysteen in ay wax horusocod ah ka gaaraan wadahadalkii barnaamijka nukliyeerka ah ee Pyongyang.
Chuck Prichard oo u hadlay Defense POW/MIA Accounting Agency ayaa sheegay Arbacadii in masuuliyiinta Kuuriyada Waqooyi aysan wax xiriir ah la soo samayn tan iyo wixii ka dambeeyay shirkii bishii Feebaraay dhacay.
Previous articleSomaliland oo xabsiga dhigtay Xildhibaan Dhakool oo inkiray Maalinta Xorriyadda Somaliland ee 18 May
Next articleXogta Dahsoon: nooca Markabka Dagaal ee Shiinuhu samaysanayo